Mifantoha Heat Pump ny R & D sy ny Manufacturing
Aquark dia matihanina inverter dobo hafanana mpanamboatra paompy ao Guangdong, Sina. Nisiany mponina iray manam-pahaizana amin'ny ekipa matihanina 20 taona ny hafanana paompy traikefa.
Aquark manana vondrona mpankafy endrika indostria. Izy ireo Manaja ny tsena sy ny mpanjifa sy mamorona mahatalanjona Atoa Fahanginana slab famolavolana. Izy ireo dia hitandrina ny mamorona teti-dratsy malaza kokoa ho an'ny mpanjifa traikefa tsara indrindra.
Ny fototra herin'ny Aquark dia ny R & D ekipa, izay manana ny rafitra fanaraha-maso ny mpitarika inverter teknolojia ary koa ny paompy hafanana dobo rafitra teknolojia. Injeniera rehetra dia feno hevitra hamaky amin'ny alalan'ny teknolojia nentim-paharazana ny dobo hafanana paompy, manolotra vahaolana vaovao ho an'ny mpiara-miasa maneran-tany.
Quality Strict Production
R32 / R410A Production-dalana,